Momba ny Obeer - Shandong OBeer Machinary Equipment Co., Ltd.
Ny vinanay: Ho mpiara-miasa mpamaky labiera tsy mivadika aminao.
Shandong OBeer Masinina Fitaovana Co., Ltd. dia mpamokatra fitaovana fanaovana labiera matihanina. Ny orinasa dia mampifangaro ny famolavolana, ny R & D, ny famokarana, ny varotra, ny fametrahana ary ny fananganana komisiona, ary manolo-tena ho lasa mpamatsy fitaovana kilasy voalohany. Ny famokarana lehibe indrindra dia: labiera labiera, rafitra homebrew, labiera famokarana labiera ary labiera ara-barotra, fitaovana famokarana divay ary fitaovana fanohana.
Obeer Company dia manana ekipa fikarohana sy fandrosoana ara-teknika matihanina, teknolojia famokarana faran'izay tsara, fitaovana famokarana mandroso, ary rafitra serivisy aorian'ny fivarotana; Amin'ny alàlan'ny fianarana ny fizotry ny famokarana labiera samihafa eto amin'izao tontolo izao sy ny famolavolana ireo fitaovana fanaovana labiera ho an'ny mpanjifa eto an-toerana sy avy any ivelany mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Izahay dia tsy vitan'ny hoe mikatsaka kalitaon'ny vokatra tsara, fa ny ahiahy bebe kokoa amin'ny kolontsain'ny orinasa sy ny serivisy serivisy, natokana hametrahana ny sary sy ny marika orinasa, araho ny foto-kevitra momba ny famolavolana fananganana manokana, ny fenitra famokarana ary ny fanamariam-pitantanana, ny iraka ampanaovinay dia mamorona sanda ho an'ny mpanjifa, manaraka tsara ny kalitaon'ny vokatra, Miezaka izahay manome ny vokatra tsara indrindra sy ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany.
Hatramin'ny niorenan'ny orinasa tamin'ny taona 2016 dia nanolotra fitaovana fanaovana labiera izahay ary nahomby tamin'ny fanondranana tany amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 60 ao anatin'izany i Alemana, Russia, Belgique, Etazonia, Canada, Australia, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, Korea Selatan, Argentina, Brezila, Singapour ary faritra sy firenena hafa. Noho ny kalitaon'ny vokatra tsara sy ny serivisy aorian'ny fivarotana, dia neken'ny mpanjifa izy io!
Fanavaozana, mahomby, fitsitsiana angovo ary ara-toekarena, mpiara-miasa amin'ny vahaolana eran-tany amin'ny labiera asa-tanana isika!